Xildhibaano sheegay in Qaramada Midoobay, urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika ay ku xad gudbeen Qaranimada Somalia | Anti-Tribalism
← Somaliland oo u Digtay Siyaasiyiinta iyo Salaadiinta Ka Qaybgasha Shirka Ansixinta Dastuurka Soomaaliya
Xildhibaan Muuse Suudi “Waxaa lana yiri hubka iska dhiga,oo ku soo biira siyaasada, balse waxaa hadda muuqata in dalka uu gumeysi ku jiro” sidaa waxaa ku calaacalay Muuse suudi. →
Xildhibaano sheegay in Qaramada Midoobay, urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika ay ku xad gudbeen Qaranimada Somalia
02.05.2012 – Xildhibaanad Caasha Axmed Cabdalla oo ka tirsan Baarlamaanka KMG Soomaaliya ayaa sheegtay in dowlado ka tirsan kuwa Afrika ay faragelin toos ah ku hayaan arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya, isla markaasna ay dadka Soomaaliyeed ku qasbayaan in wixii ay doonayaan ay u yeeriyaan.
Caasho Axmed Cabdalla oo ka hadleysay hadal ka soo yeeray Qaramada Midoobay, Midowga Afrrika iyo IGAD oo digniin loogu jeediyay dadka kasoo horjeeda Road Map-ka iyo ansixinta dastuurka ayaa waxay sheegtay in dastuurku uu yahay wax ay iska leeyihiin dadka Soomaaliyeed, ayna iyagu diidi karaan amaba ay ogolaan karaan cid kalena aysan ku qasbi karin.
Mahiga ayey ku eedaysay inuu ku milmay ragga siyaasadda Soomaaliya horboodaya, waxayna sidoo kale ku eedaysay Xukuumadda C/weli Gaas inay ku fashilantay howshii loo xilsaaray, iyadoo xustay inay waajibaadkii saarnaa Xukuumaddu ay gudan weysay.
Sidoo kale Xildhibaanad Caasha Axmed Cabdalla waxay sheegtay in ciidamada Itoobiya iyo Kenya aysan ku joogin ogolaansho Baarlamaan, sidaas awgeed loo baahan yahay inay dalka ka baxaan, maadaama ay dalka ku joogaan si aan sharci aheyn, waxayna ugu baaqday dowladaha Kenya iyo Itoobiya inay ciidamadooda dalka Soomaaliya kala baxaan.
Dhinaca kale Xildhibaan Saleebaan Maxamed Ibraahim oo isna ka hadlay hadalka ka soo yeeray Qaramada Midoobay, Midowga Afrrika iyo IGAD ayaa sheegay in wax aan loo dulqaadan karin tahay in dad aan Soomaali aheyn ay maamulaan Soomaaliya mustaqbalkeeda iyo aayaheeda, ayna xoog ioyo handadaad ku meel mariyaan wixii ay doonaan, wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay banaanbaxyo isugu soo baxaan, isla markaasna ay ka soo horjeestaan dastuurka iyo qorshaha uu wato Mahiga sida uu yiri.